Mifandimby mampiasa an’ireo kianja roa ireo izy ireo isan’andro. Omaly alatsinainy 15 jolay 2019, ohatra, ny maraina ny Barea JIOI no niakatra ny kianjan’i Mahamasina ary ny tolakandro kosa no anjaran’ny Barea Chan. Raha ny tazana omaly hariva teny an-toerana dia miezaka mampitovy tsara ny tadin-dokangan’ireo mpilalao ny mpanazatra mirahalahydia i Franklin sy Hary. Marihina fa tsy mbola navoakan’ny “Comité de Normalisation FMF” ofisialy ny anaran’ireo mpilalao handrafitra farany an’ity ekipa ity hiatrika ny ekipam-pirenen’i Mozambika amin’ny lalao dingana faharoa mandroso ny zoma 26 jolay ho avy izao etsy Mahamasina. Raha ny fantatra mantsy dia mbola afaka handrafitra an’ity ekipa ity ry Leda sy Baggio izay avy niatrika ny CAN 2019 tany Egypte.